Gunooyinka Gaarka ah ee Dowlada ee COVID19 - Janaayo 2021 | HelpRefugeesWork
Gunnada Shaqo La'aanta ee Gaarka ah
Haddii aad u diiwaangashan tahay sidii shaqo la'aan Xafiiska Shaqada inta lagu jiro bisha Janaayo 2021, waxaad horey u heshay gunnada shaqo la'aanta mana aadan ka tagin cyprus ilaa Maarso 2020, waxaad dalban kartaa Gunno Khaas ah oo ah € 500 muddo bil ah. #
Fadlan ogow inaadan kaalmadan ka heli karin muddo kasta oo aad hesho gunada shaqo la'aanta, gunada jirrada, gunnada hooyanimada gunnada aabbanimada, gunnada hawlgabka ee sharciga ah ama gunno kale oo ka timaadda Qorshooyinka taageerada ee Covid-19
Codsiyada waxaa laga heli karaa online ka dhammaadka Janaayo.
Gunnada Fasaxa Gaarka ah ee ujeeddooyinka Daryeelka Carruurta
Haddii aad hadda ka shaqeysid ganacsi aan kaqeyb qaadanaynin qorsayashiisa taageerada ee 19-ka ee dawladda, iyo
i. Adiga ayaa mas'uul ka ah daryeelka carruurta ilaa 15 sano jir iyo / ama carruurta naafada ah da 'kasta ha lahaadeene,
ii. ma jiraan wax daryeel carruur ah oo loogu talagalay qoyskaaga, iyo
iii. ma shaqeyn kartid waqti dhiman ama guriga ama saacado jilicsan,
Waxaad xaq u yeelan kartaa in lagu siiyo Gunnada Fasaxa Gaarka ah oo ujeeddooyin xannaano-carruureed ah.
FIIRO GAAR AH: Loo-shaqeeyahaagu wuxuu ubaahan yahay inuu dalbado, markaa fadlan isaga / iyada u sheeg qodobkaan.
Gunnadani waxay daboolaysaa 60% mushaharka, ugu badnaan € 1,214 euro, muddo bil ah.
Gunnadan waxaa la siin karaa ugu badnaan 3 toddobaad marka la isu geeyo labada waalidba, waxaana loo xisaabiyaa iyadoo loo eegayo maalmaha ay heli doonaan.
Fadlan ogow haddii hal waalid helo kaalmada, waalidka kan kale ma heli karo isla muddadaas.
Gunnada Fasaxa Gaarka ah ee dadka halista ugu jira jirro halis ah oo ka yimada Covid-19 ka
Haddii aad leedahay xaalad caafimaad oo ku jirta liiskan bukaanno leh arrimo halis u ah jirro halis ah oo ka socota COVID -19 oo ay daabacday Wasaaradda Caafimaadka oo aad hadda shaqeyso, waxaa laga yaabaa inaad xaq u yeelato Gunno Gaar ah oo loogu talagalay Maqnaanshaha Shaqada.
Ujeedada gunnada ayaa ah in loo oggolaado dadka shaqeeya ee arrimaha caafimaadka ka jira inay iska difaacaan Covid-19 isla markaana ay guryahooda iska joogaan iyagoo aan shaqadooda waayin
Ogow: Codsiga Gunnadan waxaa u baahan inuu sameeyo cidda aad u shaqayso. Loo-shaqeeyahaagu waa inuusan kaqeyb qaadan Qorshayaasha kale ee taageerada ee Covid-29 ee Wasaaradda Shaqada.
1. Waxaad u baahan tahay inaad hayso warbixin ka socota Dhakhtarkaaga Shakhsi ahaaneed nooca cudurkaaga.
2. Loo-shaqeeyahaagu wuxuu u baahan yahay inuu caddeeyo in nooca shaqada awgeed, aanad ka shaqeyn karin guriga, ama adiga oo aan lala xiriirin dadweynaha.
Muddada gunadaas la bixin doono, loo-shaqeeyaha ayaa laga sii daayay waajibaadka bixinta mushaarkaaga.
Wixii macluumaad dheeri ah ama caawimaad ah, fadlan nagala soo xiriir 22205959 ama WhatsApp / VIber 97767329 ama iimaylka info@helprefugeeswork.org.